Manao Famoriam-bahoaka Hiaro Ny Biraon’ny Mpampanoa Lalàna Manokana ny ‘Revolisiona Maroloko’ Makedoniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Septambra 2016 16:42 GMT
“VMRO, manana olana isika”—afisy mampiseho ny Mpampanoa lalàna Manokana Katica Janeva sy ny manampahefana ambony avy amin'ny antoko, ny solombavambahoaka Ilija Dimovski, ireo minisitra teo aloha Gordana Jankuloska sy Mile Janakieski, ary ny praiminisitra teo aloha Nikola Gruevski. Afisy avy amin'i Zoran Kardula, nahazoana alalana.
Nanambara fihetsiketsehana vaovao nokasaina atao eo anoloan'ny lapan'ny parlemanta ao Skopje tamin'ny Alatsinainy 28 Septambra ireo mpitarika ao amin'ny “Revolisiona Maroloko”, ho fanohanana ny Biraon'ny Mpampanoa lalàna Manokana (SPO).
Taorian'ny volana maro nanomanana sy ny fotoana tsy very na dia kely aza tamin'ny fanaovana an-kasomparana sy fanakanana ara-dalàna nataon'ny antokon'ny fitondrana, VMRO-DPMNE sy ny DUI, nitory ireo manampahefana ambony ao amin'ny antokon'ny fitondrana sy ireo manampahefam-panjakana tamin'ireo raharaha roa nanomboka tamin'ny 15 Septambra ihany nony farany ny mpampanoa lalàna manokana ao Makedonia.
Araka ny nohazavain'ny mpampanoa lalàna manokana Fatime Fetai, dia mikasika ny fanimbàna ireo antontan-taratasy mifandraika amin'ny fitaovana tsy ara-dalàna fihainoan-dresaka ny fiampangana iray, ary mikasika ny herisetra teo an-tokotanin'ny Kaomina Afovoany, nitranga tamin'ny Jiona 2013 ny fiampangana faharoa.
Nitohy ny ezak'ireo mpanao lalàna mba hanemotra ny fitsarana, anisan'izany ny fametrahana fanontaniana fanodinan-dresaka maro natao tamin'ny lehiben'ny SPO Katica Janeva mikasika ny fampahafantarana ny tatitra isan-taona nataony vao haingana, anisan'izany ny fitakiana itantaraina amin'ny antsipiriany ny fandanian'ny birao. Nandritra ny fotoam-pivoriana ofisialy, nanevateva sy nandrahona azy ampahibemaso ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta, toa miezaka mampatahotra azy hanatsoaka ny fiampangana ny antokon'ny fitondrana.
“Fanahy inianareo tazonina eto mandritra ny telo andro aho ary tsy avelanareo hiasa. Nipetraka teto sy namaly fanontaniana miverimberina aho nandritra ny telo andro. Fanahy inianareo tazonina eto aho amin'izay tsy afaka miasa “, hoy i Janeva tamin'i Krste Mukoski, mpikambana ao amin'ny parlemanta, izay niampanga ny lehiben'ny SPO ho tsy mahay miasa sy tsy mahazaka ny toerana itondrana ny sampan-draharaha, hoy ny tatitry ny Meta.mk.
Manana tombontsoa iadiana ny maro amin'ireo solombavamboaka voalaza ireo, satria ny feon'izy ireo dia azo renesina amin'ny santionana fihainoan-dresaka tafaporitsaka, izay azo atao porofo hanaovan'ny SPO fanadihadiana.
Taorian'ny andro voalohan'ny fotoam-pitsarana, nandràra ny fandrakofana mivantana tamin'ny fahitalavitra ireo solombavambahoaka avy ao amin'ny VMRO-DPMNE sy ny DUI, na dia eo aza ny fitakiana miharihary ara-dalàna fa misokatra ho an'ny daholobe ny fotoam-pitsarana. Nandritra izany fotoana izany, niaretan'i Janeva ny fotoam-pitsarana, na dia fantatra aza fa manana olana ara-pahasalamana izy.
Tsy hanjavona ny fandraketana ny heloka bevava lehibe satria hoe nitafy ambony akanjo manify ny mpampanoa lalàna. GadraoNyJiolahy
Mety hoe nandamoka ny fanorisorenana an'i Janeva, na izany aza, miezaka mampiseho amin'ny vahoaka fa manao fihetsika toy ny “mpampijaly tahaka ny adala romotra” sy manala baraka ny firenena ireo mpanao lalàna.
Toa miverina any amin'ny nandefa azy ny fanorisorenana, satria mihamaro ireo olom-pirenena naneho hevitra niampanga fa manao fihetsika toy ny “mpampijaly tahaka ny adala romotra” sy manala baraka ny firenena ireo depiote.
Tao amin'ny haino aman-jery mahazatra, izay fehezin'ny antokon'ny fitondrana amin'ny ankapobeny, lasibatry ny fandrakofam-baovao mamely azy hatrany ny SPO.
Bango tokana nandritra ireo roa andro ireo: mety mahita sary maharikorikon ‘ny parlemanta isika. Andrim-panjakana nolambolambon'ny DPMNE nandritra ny folo taona farany.
Nampiroboroboan'ireo mpanohana an'i Janeva tamim-pavitrihana ny fihetsiketsehana nokarakarain'ny hetsika “Revolisiona Maroloko”, tamin'ny alalan'ny fizarana vaovao momba ny hetsika nanomboka tamin'ny Zoma 23 Septambra, ary nozarain-dry zareo in-jato mahery tao amin'ny Facebook:
Ry rahalahy sy anabavy namana mpiara-mitolona
Miantso anareo izahay ho tonga amin'ny 26 Septambra 2016 amin'ny 5 ora hariva eo anoloan'ny Antenimieran'ny Repoblika Makedonia amin'ny famoriam-bahoaka ho fanohanana ny SPO
Taorian'ny fialan-tsasatra tamin'ny fahavaratra, mbola eo ambanin'ny sakatsakan'afon'ny mpitondratenin'ny fitondrana ny SPO. Nahita maso hazalambo tena izy sy fampielezan-kevitra mamely an'i Katica Janeva sy ny SPO manontolo tao amin'ny Antenimiera sy ny haino aman-jery eo ambanin'ny fifehezan'i Gruevski voampanga izahay.
Tao anatin'izany ihany, mbola mampiasa ny fahafahana rehetra hanakanana ny asan'ity andrim-panjakana ity ny governemanta mbola tantanin'i Gruevski voampanga
Mandà ny fangatahan'ny SPO hanagadra ireo olona ahiahiana ny mpitsara mpanao kolikoly nahazo ny asany avy amin'ny antokon'ny fitondrana. Naaton'izy ireo ihany koa ny fanidiana anaty trano ambenana ny ahiahian'ny SPO ary nandà hitsara azy ireo amin'ny heloka bevava amin'ny raharaha hafa, noho ny antony tsy nahitana olana raha namaly ny raharaha Zvrlevski mpampanoa lalàna [tsy manokana].
Mbola tsy nametraka fotoana hanapahana hevitra hijerena raha mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ny SPO ny Fitsarana Avon'ny Lalàmpanorenena.
Tsy mety manohana ny SPO ny solombavam-bahoakan'ny [VMRO-] DPMNE. Tsy mety mandany ny lalàna ilaina ho fiarovana ny vavolombelona sy ny mpanao ampamoaka ry zareo; tsy mety manitatra ny fe-potoam-piasany; ary mampiasa ny polipitran'ny parlemanta hiezahana hanaratsiana an'i Katica Janeva sy ny andrim-panjakana soloiny tena.
Manohy amin'ny fanendrena ireo olona mbola eo ambanin'ny fanadihadian'ny SPO mba hisahana asam-panjakana ambony ny fitondram-panjakana, izay mbola mijoro ao ambadiky ny voampanga Gruevski.
Mila ny fanampiantsika indray ny SPO. Tsy tokony avelantsika hihevitra ny fitondrana fa tsy mahazo fanohanana lehibe, iarahan'ny rehetra sy mahatapa-kevitra avy amin'ny olom-pirenena ity andrim-panjakana ity, na dia vetivety monja aza!
Raha mbola tsy misy ny rariny, tsy hisy ny fandriampahalemana!
Araka ny fitsapan-kevitra tamin'ny Aprily notontosain'ny Ivo-toerana Repoblikana Iraisampirenena vatsian'ny fanjakana Amerikana vola, 63 isan-jaton'ny firenena no nanohana ny asa nataon'ny Biraon'ny Fampanoavana Manokana SPO.